Shuruudaha | Mytrickstips
Home // Shuruudaha
SHARCIYADA ADEEGA - TOS
Fadlan akhri 'Terms of Service' si taxadar leh kahor intaadan isticmaalin boggayaga internetka. Adiga oo isticmaalaya ama isticmaalaya boggayaga internetka, waxaad na siisaa ogolaanshahaaga inaad ku wadaagto oo aad isticmaasho macluumaadka laguugu soo diray boggayaga. Sida ku xusan shuruudaha adeegeena, waxaad tahay 'ku heshiin' iyo 'aqbalidda ' ereyadaas adigoo isticmaalaya boggayaga internetka hab kasta.
Boggayaga ayaa laga yaabaa inuu leeyahay xiriiro badan oo ah goobaha sadexaad. Annagu si toos ah uma xirna mid ka mid ah boggaan. Intaa waxa dheer, dhammaan qalabka iyo calaamadaha la xidhiidha waa MA haysato oo na xukumo. Aqoonsiga iyo xakamaynta guryaha caqliyeed waxay la jiraan mulkiilayaasha udhaxeeya. Waxaan u qaadaneynaa mas'uuliyad aan la xiriirno iyaga.
Qeyb ka mid ah boggayaga waxaa loola jeedaa in aan soo bandhigno nooc kasta oo ah talooyin ama balanqaadyo. Masuul kama noqon doonno wax khasaare ah oo adiga ama ganacsigaaga ah sababtoo ah booqashada ama isticmaalka boggayaga ujeeddo kasta. Kama dammaanad qaadno wax kasta oo la muujiyey ama loo adeegsaday macluumaadka iyo adeegyada aan ku bixino boggayaga.
Waxaanu xaq u leenahay inaanu saxno wixii khalad ah ee ku jira bogga intarnetka adoon bixinin ogeysiis hore. Mar walba ma hubin in khaladaadka si dhaqso ah loo xallin doono. Intaa waxaa dheer, ma ballanqaadno in website-kayaga la heli doono mar kasta. Macluumaadka ku yaal boggayaga ma aha buug-sharciyeed, waana in aan loo eegin sidii sharci, dhaqaale, ama gargaar caafimaad. Mawduucyada la daabacay waxay ujeeddadoodu tahay in macluumaadka ujeeddo oo keliya aysan ahayn bedelaad la-talin xirfadeed.
Waxaad isticmaaleysaa boggayaga khatartaada. Mas'uuliyad kama saarno wax kasta oo keeni kara in laga soo baxo ama ku xirnaado adeegsiga adeegyadayada ama bogga qaab kasta ama qaab kasta. Miisaanku waa 100% adiga oo xitaa haddii boggayaga si cad loogu sheego khasaarada iman karta. Waxaad ogolaatay MA si aan ula xisaabtanno wixii khasaare ah, magdhow, ama deymano xaalad kasta, haddii uu toos u yahay, aan toos ahayn, ama natiijo ahaan.
Inkastoo dadaal kasta loo qaadayo si loo hubiyo in macluumaadka ku yaal boggayaga internetka uu yahay mid sax ah, ma hubno saxsanaanta ama dhamaystirka. Waxba kuma jiraan boggaan internetka; (a) Xaddid ama ka-reebistaada ama masuuliyadeena dhaawaca shakhsi ahaaneed ama dhimashada ka timaadda dayacaad. (b) Xakamee ama ka-saaro adiga ama masuuliyaddayada khiyaanooyinka dabiiciga ah. (c) Xaddid ama ka saarida adiga ama masuuliyadeena wax kasta oo aan sharcigu oggolayn. (d) Xaddid ama ka saarida adiga ama mas'uliyadayada oo aan laga saari karin sharciga sharci ahaan.
Waxaan bixinaa shuruudaha adeegga oo kaliya Ingiriisi. Adigoo isticmaalaya boggayaga internetka, waxaad ku raacsan tahay in Terms of Service Nidaamkayagu waa mid macquul ah. Haddii aadan ogolaan, waxaa lagugula talinayaa inaadan isticmaalin boggayaga internetka. Ma jirto xaalad, waa inaad sii wadataa isticmaalka boggayaga haddii aadan ku raacsanayn dhamaan shuruudaha adeegga ee nagu soo koobay.
Maaddaama ay tahay madax-bannaani iyo xaddidan mas'uuliyadeed, waxaanu xaq u leenahay inaan ilaalino oo xaddidno waajibaadkeena shakhsi ahaaneed. Sidaa darteed, maskaxda ku hay sida aad u isticmaashid boggayaga. Sida shuruudaha isticmaalka, waxaad aqbashaa inaadan soo gudbin doonin wax dalab ah oo ka dhan ah boggayaga internetka ama shaqaalaheena wixii ah masuuliyad ama magdhow kasta oo aad ku dhibtoon karto oo ku xiran isticmaalka shabakadeena. Isla marxalado isku mid ah, waxaad ku raacsan tahay in Shuruudaha Adeegu uu yahay aqoon ku filan gacmahaaga si aad u aqbalaan in boggayaga internetka uu naga difaacayo annaga iyo shaqaalahayaga wixii ka soo horjeeda wax kasta oo laga soo horjeedo.
Qodobbo aan la fulin
Haddii qayb ka mid ah websaydhiyeha kufsiga uusan ku dhejinaynin sharciga quseeya, ma saameyn doonto xoojinta shuruudaha kale ee adeegga ee ku xusan boggan. Intaas waxaa sii dheer, waxaan ka dhiidhinnay dhammaan wixii qandaraasle ah ee ka yimaada meel kasta oo seddexaad ee nala soo xidhiidhaya annaga oo nala wadaagno. Waxaanu u shaqeynaa sidii nin dhexdhexaad ah si loogu soo bandhigo codsiyada bilaashka ah ee martida. Annagu si toos ah uma xirno ama la xidhiidhin mid ka mid ah sifooyinka gaarka ah ee goobaha saddexaad.
Adeegyadeena / macluumaadka bilaashka ah waxaa la siiyaa "AS IS" iyada oo aan laheyn wax damaanad ah ama xarig ah. Sidaas awgeed, ma xaqiijin karno in xalka uu na siiyay uu shaqeyn doono wakhti kasta. Waxaan rabnaa inaan ku siino qawaaniin hadiyado lacag la'aan ah, laakiin ma ballan qaadi karno in koodhku uu shaqayn doono 100% waqtiyada. Sidoo kale, waa inaad ogolaato inaad buuxiso talaabooyinka lagama maarmaanka ah si aad u furto lambarka, taas oo laga yaabo inaad u baahan tahay inaad buuxiso sahan xaaladaha badi. Sida ugu fiican ee aan awoodno, waxaan isku dayeynaa inaanu soo bandhigno "wax kharash ah", laakiin waa waddan gaar ah. Sidaas darteed, kharash kasta oo la xidhiidha sahaminta ma hoos imanayso xukunkayaga.
Waxaan awood u leenahay inaanu wax ka bedelno "Shuruudaha Adeegga" wakhti kasta oon helin ogeysiis hore. Waa mas'uuliyadda isticmaale ahaaneed ee la xiriirta isbedelada hadda jira. Isticmaaluhu wuxuu ka heli doonaa shuruudaha iyo shuruudaha dib loo eegay isla boggan. Haddii aad qabto su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan shuruudaha adeegga boggayaga internetka, waxaad dareemaysaa inaad nala soo xiriirto.